Wararkii Ugu Danbeeyay Xaalada Ceerigaabo Saaka – KHAATUMO NEWS
Wararkii Ugu Danbeeyay Xaalada Ceerigaabo Saaka
Xiisadaan dagaal ayaa waxaa ay u dhaxeeysaa Ciidamo ka tirsan kuwa Maamulka Soomaaliland iyo kuwa uu hoggaaminayo Korneel Caare oo horay uga mid ahaa Ciidamada Soomaaliland,waxaana ay saakay ka taagan tahay deegaan duleedka ka ah Magaalada Ceerigaabo.
Shalay gelinkii hore ayaa dagaal culus waxaa uu Ciidamada soomaaliland iyo kuwa Korneel Caare uu ku dhexmaray deegaanka Karinka ee jidka Tabca ee Woqooyiga Ceerigaabo, iyada oo dagaalkaas ay labada dhinac guulo ka sheegteen.
Wararka saakay la helayo ayaa waxaa ay sheegayaan in xaalada deegaankii lagu dagaalamay weli laga dareemayo xiisad dagaal oo u dhaxeysa labada dhinac sidoo kalena mararka qaar la maqlayo rasaas goos goos ah.
Afhayeen u hadlay Jabhadda uu hoggaamiyo Siciid Cawil Jaamac (Caarre) ayaa sheegay in dagaalkii shalay ay ka gaareen guulo waaweyn,isla markaana Ciidamadooda ay Soomaaliland kala wareegeemn deegaano dhowr ah.
Dhinaca kale Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlay dagaalka Ciidamada Soomaaliland iyo Jabhadda Korneel Caare ku dhexmaray duleedka Ceerigaabo ayaa sheegay in Arrinta ka taagan Magalada Ceerigaabo ay nabad ku dhamaan doonto.
Previous Post: Deg Deg:Guddoomiyaha Barlamaanka Soomaaliya oo guryo ka iibsaday Turkiga
Next Post: Daawo:Caare Oo Ka Hadlay Jabkii Soo Gaadhay Ciidamada Muuse Biixi iyo Goobaha Uu La Wareegay,